I-Semalt Expert ibonisa imiqathango yokukhusela kwiiNtsholongwane zekhompyutha
Sonke sasinobudlelwane obubuhlungu nolunakulibaleka ngeevaysi yekhompyutheni ngexesha elithile. Esinye isifundo esiba sisisisondeleyo kukucinga ukuba ungazi iindlela zokuphepha okanye ukuphelisa le ntsholongwane ngaphambili.
Ukungaxhalabisi, u-Ivan Konovalov, omnye weengcali ezinolwazi iSemalt , kweli nqaku libonisa iindlela eziphathekayo zokuphepha ukusuleleka kwiintsholongwane ze-computer. Ziquka:
Iisoloko ikhuphela iiprogram ezivela kwimithombo esemthethweni kunye ethembekileyo
Ezi zintsholongwane zichaphazela kwaye zonakalisa iinkqubo zekhompyutheni zenza ukungena kwinkqubo yakho. Ngoko ke, kufuneka ukhuphe iiprogram ezivela kumthengisi wangempela okanye kwiwebhusayithi yesithathu.
Gcina iComputer Backup
Kuhlala kululeka ukuba ubekho ikopi eyongezelelweyo yazo zonke iifayile zakho eziphambili. Ukubuyela emva kukuvumela ukuba ufumane yonke idatha yakho kwaye ubuyele kwimisebenzi eqhelekileyo.
Ukukhangela nokuQinisekisa ii-imeyili ezixhumeneyo
Inkohliso entsha edolophini yokusuleleka ngentsholongwane nge-imeyili okunamathiselwe okanye ngenjongo yokungazi. Izikhonkco ze-imeyile ezinobungozi zingena kwinkqubo ekuvuleni i-imeyile ngoko ke kufuneka imfuneko yokutshintshela nokuqinisekisa ezi fakelo phambi kokukhuphela. Kunokuba luncedo ngakumbi kuba umthombo we-imeyile unokuthi unqatshelwe kwaye awuqondi ukuba uyathumela ii-virus.
Fakela izicwangciso ze-Anti-Virus ne-Malware
Ukulungiswa kwintsholongwane ye-anti-virus kunye ne-malware yenza ikhompyutheni yakho iqiniseke ngokukhangela kwaye isuse izinto ezinobungozi..Umlawuli unokukwazi ukuqhuba iinkqubo eziqhelekileyo zeendlela zokukhusela.
Khubaza i-imeyli yokujonga imifanekiso
Akufuneki ukukhuphela iifayile ezikhuselwe kwiikhonkco ze-imeyile ukuze ufumane iintsholongwane kwindlela yakho. Usulelo lunokuqala ngokujonga imifanekiso nje kwi-imeyile yakho. Ukukhusela oku, khubaza umboniso wakho wesithombe somfanekiso weklayenti ye-imeyili ngelixa ukhangele loo mifanekiso efunyenwe kwimithombo ethembekileyo.
Uhlaziyo lweSistim yokuSebenza rhoqo
Inkqubo yakho yekhompyutheni iya kuhlala ikhululekile kwiintsholongwane xa wenza umgudu wokuba usebenze inkqubo ehlaziyiweyo ngamaxesha onke. Uhlaziyo lwenza luxoxe kwaye lukwazi ukujongana neentsholongwane zekhompyutha zakutsha.
Ukukusebenzela i-Firewall ye-Computer
Nangona uhlaziya iinkqubo zakho kunye nenkqubo yokusebenza, i-firewall yikhompyutha yokuqala kunye neyokugqibela yokukhusela kwiintsholongwane zentsholongwane. Yigcine kwaye isebenze ukukhusela iintsholongwane zentsholongwane yesithathu.
Yenza Ukusetyenziswa kwamalungelo olawulo lwekhompyutha
Ikhompyutheni kufuneka ibe nomlawuli omnye kuphela onamalungelo kunye namalungelo okufaka iinkqubo. Sebenzisa la malungelo ukuphepha abasebenzisi bangaphandle ekuvezeni inkqubo yakho kwiingozi ezinjalo.
Ukubeka iliso rhoqo kwi-PC
Ewe, awuyi kukwazi ukuba i-firewall yakho ye-firewall ingasebenzi, okanye i-updates iyadingeka kwiinkqubo zakho ze-OS ngaphandle kokuba uqaphele rhoqo inkqubo yakho efanayo.
Hlanganisa kwizaziso zekhompyutha
Iinkqubo zokulwa nentsholongwane kunye ne-malware zikhokhwa ngendlela efanelekileyo yokumxwayisa umsebenzisi kwangaphambili xa kufuneka iinguqu zakutsha zifumaneke okanye zifumaneke. Baya kukwazisa umsebenzisi xa kusisongelwa i-malware. Ungalokothi ulawule isilumkiso kunye nezaziso. Kwiphepha elifanayo, uhambelane kwizaziso zazo zonke iikhompyutheni zekhompyutha ngexesha elide.
Beka uphinde ugcine iSebe le-IT
Imibutho emikhulu, udinga isebe le-IT ukugcina iinkonzo zakho zekhomputha kunye neenkqubo zokusebenza kakuhle Source .